Eksodho 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Zviratidzo zvitatu zvaifanira kuitwa naMozisi (1-9)
Mozisi anozviona seasina kukodzera basa raapiwa (10-17)
Mozisi anodzokera kuIjipiti (18-26)
Mozisi anoonana zvakare naAroni (27-31)
4 Asi Mozisi akapindura kuti: “Ko kana vakasabvuma zvandichataura, vorega kuteerera inzwi rangu?+ Nekuti vachati, ‘Jehovha haana kuzviratidza kwauri.’” 2 Jehovha akabva ati kwaari: “Chii icho chiri muruoko rwako?” Iye akapindura kuti: “Itsvimbo.” 3 Iye akati: “Ikande pasi.” Saka akaikanda pasi, ikava nyoka;+ uye Mozisi akaitiza. 4 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Tambanudza ruoko rwako uibate nekumuswe.” Saka akatambanudza ruoko rwake akaibata, ikabva yava tsvimbo muruoko rwake. 5 Mwari akabva ati: “Izvi zvichaita kuti vatende kuti Jehovha Mwari wemadzitateguru avo, Mwari waAbrahamu, Mwari waIsaka, naMwari waJakobho,+ akazviratidza kwauri.”+ 6 Jehovha akatizve kwaari: “Ndapota, isa ruoko rwako munguo yako nechepachipfuva.” Saka akaisa ruoko rwake munguo yake nechepachipfuva. Paakabudisa ruoko rwake, akaona rwazara maperembudzi akaita sechando!+ 7 Akabva ati: “Dzorera ruoko rwako munguo yako nechepachipfuva.” Saka akadzorera ruoko rwake munguo yake. Paakarubudisa munguo yake, rwakanga rwaita seimwe nyama yake yese! 8 Iye akati: “Kana vasingazobvumi kana kuteerera paunoita chiratidzo chekutanga, vachateerera paunoita chiratidzo chechipiri.+ 9 Kunyange kana vakasabvuma zviratidzo zviviri izvi uye vakasakuteerera, uchachera mvura muRwizi rwaNire woidira pasi pakaoma, uye mvura yauchatora muna Nire ichava ropa kana yava pasi pakaoma.”+ 10 Mozisi akabva ati kuna Jehovha: “Pamusoroi Jehovha, ini handina kumbobvira ndava munhu anogona kunyatsotaura, kubvira kare kana kubvira pamatanga kutaura nemushumiri wenyu, nekuti ndinononoka kubudisa manzwi* uye rurimi rwangu runorema.”+ 11 Jehovha akati kwaari: “Ndiani akaita muromo wemunhu, kana kuti anoita kuti ave mbeveve, matsi, aone zvakanaka kana kuti ave bofu? Handisi ini Jehovha here? 12 Saka chienda, uye ini ndichava newe paunenge uchitaura,* uye ndichakudzidzisa zvaunofanira kutaura.”+ 13 Asi iye akati: “Pamusoroi Jehovha, tumai henyu chero mumwe wamunoda kutuma.” 14 Jehovha akabva atsamwira Mozisi kwazvo, akati: “Ko mukoma wako Aroni+ muRevhi haako here? Ndinoziva kuti anogona kutaura zvakanaka chaizvo. Uye atova munzira kuuya kuzokuchingura. Paachakuona, mwoyo wake uchafara.+ 15 Saka unofanira kutaura naye woisa mashoko acho mumuromo make,+ uye ndichava nemi pamunenge muchitaura,+ uye ndichakudzidzisai zvekuita. 16 Achataura nevanhu achikumiririra, uye achava mutauriri wako, uye iwe uchava saMwari kwaari.*+ 17 Uye uchaenda netsvimbo iyi iri muruoko rwako wonoita zviratidzo nayo.”+ 18 Saka Mozisi akadzokera kuna Jetro tezvara vake,+ akati kwavari: “Regai ndichienda, ndidzokere kuhama dzangu kuIjipiti kuti ndinoona kana vachiri vapenyu.” Jetro akati kuna Mozisi: “Enda zvako; ufambe zvakanaka.” 19 Jehovha akazoti kuna Mozisi ari kuMidhiyani: “Enda, dzokera kuIjipiti, nekuti varume vese vakanga vachida kukuuraya* vakafa.”+ 20 Mozisi akabva atora mudzimai wake nevanakomana vake, akavakwidza padhongi, akapinda munzira akananga kunyika yeIjipiti. Mozisi akaendawo netsvimbo yaMwari wechokwadi iri muruoko rwake. 21 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Kana wadzokera kuIjipiti, uone kuti waita zvishamiso zvese zvandakakupa simba rekuita pamberi paFarao.+ Asi ini ndichamurega achiomesa mwoyo,+ uye haazoregi vanhu vachienda.+ 22 Unofanira kuti kuna Farao, ‘Jehovha ari kuti: “Israeri ndiye mwanakomana wangu, dangwe rangu.+ 23 Ndinoti kwauri, Rega mwanakomana wangu aende, kuti anondishumira. Asi kana ukasamubvumira kuenda, ndichauraya mwanakomana wako, dangwe rako.”’”+ 24 Pavakanga vari munzira vava panzvimbo yekurara, Jehovha+ akasangana naye uye aida kumuuraya.+ 25 Zipora+ akazotora dombo rakapinza* akachecheudza mwanakomana wake, uye akaita kuti ganda racho raakanga acheka rigunzve tsoka dzake,* akati: “Nekuti muri muroori* weropa kwandiri.” 26 Saka akamusiya achienda. Zipora akabva ati, “muroori weropa,” nekuda kwekuchecheudzwa kwacho. 27 Jehovha akabva ati kuna Aroni: “Enda kurenje unochingura Mozisi.”+ Saka akaenda, akasangana naye kugomo raMwari wechokwadi,+ akamukwazisa nekumutsvoda. 28 Uye Mozisi akaudza Aroni mashoko ese aJehovha, uyo akanga amutuma,+ nezviratidzo zvese zvaakanga amurayira kuti aite.+ 29 Mozisi naAroni vakazoenda, vakanounganidza vakuru vese vevaIsraeri.+ 30 Aroni akabva avaudza mashoko ese akanga audzwa Mozisi naJehovha, uye akaita zviratidzo+ vanhu vakatarisa. 31 Vanhu vakabva vatenda.+ Pavakanzwa kuti Jehovha akanga arangarira vaIsraeri+ uye kuti akanga aona kutambudzika kwavo,+ vakapfugama, vakadzikisa misoro yavo.
^ ChiHeb., “miromo yangu inorema.”
^ ChiHeb., “ndichava nemuromo wako.”
^ Kana kuti “uchange uri mumiririri waMwari kwaari.”
^ Kana kuti “vaitsvaga mweya wako.”
^ Kana kuti “banga rakagadzirwa nedombo.”
^ Zvichida pari kureva tsoka dzengirozi.
^ Kana kuti “murume,” kureva murume akaroora.